" ဥရောပရဲ့ထိပ်သီးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့လီဗာပူးလ်နဲ့ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းတို့အားပြိုင်မယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာသွားရောက်ကြည့်ရှူအားပေးဖို့ ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရတဲ့AhBoy'' - Cele Gabar
” ဥရောပရဲ့ထိပ်သီးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့လီဗာပူးလ်နဲ့ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းတို့အားပြိုင်မယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာသွားရောက်ကြည့်ရှူအားပေးဖို့ ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရတဲ့AhBoy”
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်Ah Boyကတော့ လက်ရှိမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီး ၃ယောက်နဲ့သားချောလေး ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူမြတ်ရတနာကျော်ကလည်း ပထမဇနီးနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်အပေါ် အမေရင်းသဖွယ်ဂရုစိုက်မှုကြောင့်သူတို့မိသားစုလေးကတော့အမြဲပျော်ရွှင်ကာ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂီတအပြင်အားကစားဘက်မှာလည်းဝါသနာပါတဲ့AhBoyကတော့လက်ရှိမှာ ”Wyndham Grand Hotel မှာ Staycation နေပြီး UCL Final Match ပွဲကြည့်ဖို့ Chivas Regal Brand ရဲ့ KOL တစ်ယောက်အနေနဲ့ Chivas Luxurious Match Night ပွဲကို တက်‌ရောက်ဖို့ဖိတ်စာလေးရောက်နေပါလား…..Chivas ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်အကြိုက် ကိုယ်ကလဲ ဘောလုံး Fan ဆိုတော့ ကွက်တိပဲ‌ပေါ့ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ Personal Favorite Fashion Designer Ahlatt Lumyang ကိုယ်တိုင် Chivas နဲ့ Collabs လုပ်ပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ Fashion Design ကိုဝတ်ပြီးပွဲတက်ရမယ်ဆိုတော့ ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေမိတာ‌တော့ အမှန်ပဲဗျာ…. ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ပြောပြလာခဲ့တာပါ။
ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးအသင်းရီးရဲမက်ဒရစ်(Real Madrid) နဲ့ ချန်ပီယံ6ကြိမ်ထိရထားတဲ့ လီဗာပူးလ် ( Liverpool) အသင်းတ်ို့ အားပြိုင်မယ့်ပွဲကို ကွင်းထဲမှာ ကြည့်ရှူဖို့ကတော့ဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေအားကျရတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှူခွင့်ရတဲ့Ah Boyကတော့တကယ့်ကိုLucky Manပါပဲနော်။ AhBoyနဲ့အတူ နေဝင်းနဲ့ကျော်မင်းဦးတို့လည်း သွားရောက်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ။
” ဥေရာပရဲ႕ထိပ္သီးႏွစ္သင္းျဖစ္တဲ့လီဗာပူးလ္နဲ႔ရီးရဲမက္ဒရစ္အသင္းတို႔အားၿပိဳင္မယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာသြားေရာက္ၾကည့္ရႉအားေပးဖို႔ ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရတဲ့AhBoy”
CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ အဆိုေတာ္Ah Boyကေတာ့ လက္ရွိမွာ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့သမီး ၃ေယာက္နဲ႔သားေခ်ာေလး ကိုပိုင္ဆိုင္ထားသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇနီးျဖစ္သူျမတ္ရတနာေက်ာ္ကလည္း ပထမဇနီးနဲ႔ရရွိခဲ့တဲ့သမီးေလးႏွစ္ေယာက္အေပၚ အေမရင္းသဖြယ္ဂ႐ုစိုက္မႈေၾကာင့္သူတို႔မိသားစုေလးကေတာ့အၿမဲေပ်ာ္႐ႊင္ကာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေကာင္းေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဂီတအျပင္အားကစားဘက္မွာလည္းဝါသနာပါတဲ့AhBoyကေတာ့လက္ရွိမွာ ”Wyndham Grand Hotel မွာ Staycation ေနၿပီး UCL Final Match ပြဲၾကည့္ဖို႔ Chivas Regal Brand ရဲ႕ KOL တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ Chivas Luxurious Match Night ပြဲကို တက္‌ေရာက္ဖို႔ဖိတ္စာေလးေရာက္ေနပါလား…..Chivas ဆိုတာကလည္း ကိုယ့္အႀကိဳက္ ကိုယ္ကလဲ ေဘာလုံး Fan ဆိုေတာ့ ကြက္တိပဲ‌ေပါ့ ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္ရဲ႕ Personal Favorite Fashion Designer Ahlatt Lumyang ကိုယ္တိုင္ Chivas နဲ႔ Collabs လုပ္ၿပီး ဖန္တီးထားတဲ့ Fashion Design ကိုဝတ္ၿပီးပြဲတက္ရမယ္ဆိုေတာ့ ပိုၿပီးစိတ္လႈပ္ရွားေနမိတာ‌ေတာ့ အမွန္ပဲဗ်ာ…. ”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ေျပာျပလာခဲ့တာပါ။
ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အေအာင္ျမင္ဆုံးအသင္းရီးရဲမက္ဒရစ္(Real Madrid) နဲ႔ ခ်န္ပီယံ6ႀကိမ္ထိရထားတဲ့ လီဗာပူးလ္ ( Liverpool) အသင္းတ္ို႔ အားၿပိဳင္မယ့္ပြဲကို ကြင္းထဲမွာ ၾကည့္ရႉဖို႔ကေတာ့ေဘာလုံးဝါသနာရွင္ေတြအားက်ရတဲ့ အိပ္မက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ၾကည့္ရႉခြင့္ရတဲ့Ah Boyကေတာ့တကယ့္ကိုLucky Manပါပဲေနာ္။ AhBoyနဲ႔အတူ ေနဝင္းနဲ႔ေက်ာ္မင္းဦးတို႔လည္း သြားေရာက္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ။
Previous post ပရိသတ်တွေမမှတ်မိလောက်စရာအသွင်အပြင်နဲ့ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မင်းသမီးချော Kim Da Mi
Next post အစ်မဖြစ်သူ အေးသောင်းရဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း